Idaacadda Maandeeq Oo Hirgelisay Barnaamijka Bar Ama Baro (Sawirro) – Goobjoog News
Idaacadda waxbarashada dalka ee Maandeeq FM oo qayb ka ah Goobjoog Media Group ayaa waxay bilowday olole waxbarasho kaasi oo wax lagu baraayo caruurta aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada.
Idaacadda Maandeeq ayaa waxaa ololahaan la fulinaayo sagaal urur oo ku midaysan dhanka waxbarashada, kuwaas oo qeyb ka ah barnaamijaan waxayna kala yihiin .
Ururka waxbarashada iyo wacyigalinta Garaad.
Ururka wadaniga Aragtida Cusub .
Ururka Jamciyadda Duyuuru Al-qur’aan.
Ururka Naadiga Af Soomaaliga.
Ururka Midnimada Ardayda Soomaaliyeed.
Ururka Midowga Horumarinta Dhalinyarada Galweyn.
Ololahaan ayaa la magac baxay ololaha “Bar ama Baro” kaasi oo loogu talo galay inay ka faa’ideestaan caruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah iyo kuwa qgoonta ah, barnaamijakaan ayaa Idaacadda iyo ururadaan waxa kala qeyb qaadanaya Iskuullo ay midyihiin .
Iskuulka Deegaan .
Iskuulka Arqam Binu Arqam .
Iskuulka Farii Low.
Iskuuladaan ayaa waxay tiradoodu ay gaaraysaa 5 Iskuul oo lagu magacaabo Alqarni, Deegaan iyo Arqam, waxaana dhigata arday gaaraysa 1084 arday, waxaana wax ka dhiga macalimiin gaaraysa 120 macalin oo iyagu isku xil qaamay inay ardadaas ay waxbaraan, Iskuulada badankood ayaa waxay ku yaalaan xaafadda dharkiinley ee gobolka banaadir .
Hadaba Goobjoog News ayaa booqatay iskuulada ay ardadaan ay wax ku bartaan,waxayna shaqada waxbarista ay u socctay si habsami leh, iyadoo aradayda lagu dhiiro galinaayay inay waxbartaan si ay noqdaan mustaqbalka hogaamiyaasha waddanka.
qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada uu ka socdo ololaha waxbarista ayaa Goobjoog News la hadlay waxaana ka mida Abuukar Macalin Axmed oo ah maamulaha iskuulka Al-qarni isagoo sheegay ololaha waxbarasho ee socda inuu aad ugu faraxsanyahay, isagoo xusay in sidii loogu talo galay uu uscoda barnaamijka” Aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay barnaamijkaan waxaa ka faa’ideysanaayo barnaamijkaan arday badan oo danyar ah oo aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada”.
Dhank kale Cabdulqaadir Ibraahim Cali waa maamula Iskuulka Deegaan waxa uu sheegay in barnaamijka ay wado idaacadda waxbarashad ee Maandeeq uu aad u soo dhaweynaayo waxa uu intaas uu ku daray inuu yahay barnaamijkaan mid wax gal u ah buslshada”Waxaan soo dhaweynayaa barnaamijka ololaha waxbarista oo ay wado idaacadda maandeeq ayuu yir Cabdulqaadir oo ah muumalaha iskuulka deegaan”.
Ujeedka ololahaan ayaa waxa uu yahay kobcinta iyo sare u qaadista aqoonta ubadka Soomaaliyeed, iyo dabar goynta jahliga sidoo kale waxaa kamida ujeedooyinkiisa in la mideeyo ururarada dhalinyarada Soomaaliyeed.
WAR DEG DEG:- Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Oo Billaabatay
Comprar Viagra Original Espana [url=https://apcialisle.com/#]buy cialis canada[/url] Order Xenical Online Australia Cialis Levitra Es Con Receta
Ecthus fbplva Generic cialis next day shipping cialis without a doctor prescription
Sfilcg edirob Buy cheap viagra cialis coupon walmart
Jlswti nsqzyf Canadian generic viagra online cvs pharmacy
Nqtyqk kucjzf Buy viagra brand online pharmacy
cialis tadalafil paypal canadian pharmacy viagra generic gen...
use cialis promise coupon orlando fl is cialis time released...
cialis usa paypal Cozaar cialis paypal [url=https://xz-pharm...
viagra pay by paypal carvedilol and viagra australianviagrao...
buy tadalafil 20: best price tadalafil 20 mg - best tadalafi...